“အရွယ်မရောက်သေးသူများ မဖတ်ရ” ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းဟာ… … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » “အရွယ်မရောက်သေးသူများ မဖတ်ရ” ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းဟာ… …
“အရွယ်မရောက်သေးသူများ မဖတ်ရ” ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းဟာ… …
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Dec 15, 2012 in News, Opinion - Op-ed, Opinions & Discussion | 51 comments
မျက်နှာဖုံးရှင်မိန်းကလေးရဲ့ ၀တ်စားပုံ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ ကိုယ်နေဟန်၊ အပြင်အဆင်တွေက အလန်းစား..
မဂ္ဂဇင်းရဲ့ မျက်နှာဖုံးအောက်ခြေမှာ အရွယ်မရောက်သေးသူများ မဖတ်ရလို့ စာလုံးအနီနဲ့ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး သတိပေးတားမြစ်ထားတဲ့ စာတမ်းဖတ်ရတာကိုက တစ်မျိုးဆွဲဆောင်နေသယောင်ရယ်။
ဒီမဂ္ဂဇင်း မထွက်ခင်ကတည်းက လူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ တိုးတိုးတမျိုး၊ မကြားတကြားတဖုံ သဖန်းပိုးနေကြသလို… အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်မှာတော့ ပလူပျံလို့ပေါ့။
အသစ်အဆန်းဆို စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ လူငယ်တွေ ကြားထဲမှာရော ဤလိုမဂ္ဂဇင်းမျိုး တသက်နဲ့တကိုယ် (နိုင်ငံခြားမဂ္ဂဇင်းများကို မဆိုလို) မတွေ့မကြုံဖူးတဲ့ လူကြီး/သူမတို့ ကြားမှာရော နာမည်ကြီးနေခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေ လျှော့ပေါ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုမဂ္ဂဇင်းမျိုးအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဖွင့်ချခွင့်ပေးထားသလဲ၊ စီစဉ်သူတွေဘက်ကရော ဘယ်လောက်ထိ (ပွင့်လင်းမြင်သာလို့ သုံးလိုက်ရမလားပဲ) ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ချပြလာမလဲ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
မထွက်ခင်ကတည်းက `ဇ`ပြထားတဲ့ ညှို့မဂ္ဂဇင်းအတွက် အမှတ်စဉ်(၁) ထွက်ပြီးချိန်မှာ ဗိန်းမောင်းသံလေး ပါလာတယ်ပြောရမလား၊ မဂ္ဂဇင်းပါ အကြောင်းအရာများကြောင့် ပြန်ကြားရေးကနေ စာနယ်ဇင်းကောင်စီကို တိုင်တယ်လို့ ကြားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးပညာပေးမဂ္ဂဇင်းလို့ တင်ပြီး လိင်ကိစ္စအသားပေးထားလို့ တိုင်တာလို့ အင်တာနက်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ စာနယ်ဇင်းကောင်စီကလည်း ခေါ်ယူမေးမြန်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
`ညှို့မဂ္ဂဇင်း´ မှ စာမျက်နှာတစ်ခု
မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာရဲ့ ပြောပြချက်အရ စာနယ်ဖင်းကောင်စီအနေနဲ့ တရားဝင်တားတာ ဆီးတာမလုပ်သေးကြောင်း၊ အမှတ်(၂) လည်း ထပ်မံထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးက မသင့်တော်ဘူးထင်တာတွေ ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပေမယ့်.. အမှတ်(၁)နဲ့ လုံးဝမတူအောင် လိုင်းပြောင်းသွားမှာတော့ မဟုတ်ဘဲ နည်းနည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်မှာလို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုမဂ္ဂဇင်းမျိုး ရှိနေတာပဲမို့၊ ကျွန်တော်တို့ဆီက လူငယ်တွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိအမြင် ဗဟုသုတအားနည်းလို့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်သွားရတတ်တဲ့ ဒီကွက်လပ်လေး ဖြည့်တာပါရယ်လို့ အင်ဒီတာကြီးက ပြောပြသွားပါတယ်..။
ဒီကနေ့ အင်တာနက်မှာ ဟိုမွှေဒီမွှေလုပ်ရင်း အဆိုပါမဂ္ဂဇင်း ဒေါင်းရလို့ စိတ်ကူးပေါက်လာတာပါ။
ရွာထဲမှာလဲ (သတိထားမိသလောက်) ဒီအကြောင်း ပို့စ်တင်တာ ပြောဆိုဆွေးနွေးတာ မတွေ့မိသေးဘူးလားလို့ (တင်ပြီးသွားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ)
မန်းဂေဇက် ပွင့်လင်းမြင်သာ ဒီမိုရွာက အိမ်နီးနားချင်းတွေ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့.. ညှို့မဂ္ဂဇင်းလို စာပေမျိုးဟာ အပြောင်းအလဲလမ်းပေါ် စလျှောက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက်..
ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာအရသော်လည်းကောင်း…
….. အတွက်သော်လည်းကောင်း မည်သို့သော အကျိုးဆက်တွေရနိုင်လို့ အကောင်းအဆိုးကို ဝေဖန်ဆွေးနွေးကြည့်ကြစို့လားဗျာ..
xxx +++ xxx
ပို့စ်တင်သူဖြစ်တာကြောင့် ကျနော့်ရဲ့အမြင်ကို အရင်ဆုံး ပြောပါမယ်။
ပထမဆုံး စီးပွားရေးအမြင်အရပြောရရင် သူတို့အနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူမှ (ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သတိပေးစာနဲ့) မထုတ်သေးတဲ့ လမ်းကို စွန့်ဦးပြီး ဖောက်သွားတာပါ (ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတွေ ဘယ်လိုလဲ အားလုံးအသိပါနော်)။ လုပ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်၊ သတိပေးစာကြောင့်ထင့် တကယ် ပေါက်လဲ ပေါက်သွားပါတယ်..။ အပြင်မှာ ၀ယ်ဖို့ကို မလွယ်ဘူးလို့ ကြားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအရ ကျနော်တို့ သိထားသင့်၊ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တာတွေ ပါပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်တွေရော၊ အပျော်ရှာ လက်တဲ့စမ်းချင်သူတွေရော၊ အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ ရိုမီယို..ဂျူးလိယက်တို့ အတွက်ရောပေါ့။ ဒီလိုစာပေမျိုး ဆရာကြီးပီမိုးနင်းတို့ ရေးခဲ့တာ အများကြီးပါ.. ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းကြောင့် သိုင်းဝိုင်း တင်ပြထားပုံတွေတော့ ကွာတာပေါ့.. အဟီး။ ပြောချင်တာက ယူတတ်ရင် ပညာပါလို့။
လူမှုရေးဖက်ကပြောရရင် ကျနော်တို့ မြန်မာ့ဓလေ့ နေထိုင်မှုအရ မောင်နဲ့နှမ သားနဲ့အမိ ဖတ်လို့တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲနော်။ ဒါပေမယ့် ငါ့သားမင့် ဒါလေးတော့ သတိထားကွ.။ အင်း ငါ့သမီးလေး ဒါမျိုးကို သိထားသင့်တယ် ဆိုတာတွေ ပါတယ်နော်။ (ကိုသော်ဇင်ကြီး ပို့စ်နှစ်ခု ရှိထားတယ်မဟုတ်လားဗျာ)။ အမှတ်(၂) မှာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်မယ် ပြောထားလေတော့ကာ..
ကျနော့် သဘောကတော့.. မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ အောင့်ပြီးတော့ နမ်းသင့်တယ် ထင်ပါကြောင်းဗျာ..။
နောက်လာမယ့် အမှတ်(၂) မျက်နှာဖုံးပါတဲ့
+++ xxx === xxx +++
ညှို့မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာရဲ့ ပြောစကားများကို ဆရာဟာဂျူလီ (ကသာ) ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာမှ ဖတ်သိရပါတယ်။
Warmly welcome to all pure opinions and brainstorming comments
ရွာထဲမှာလဲ (သတိထားမိသလောက်) ဒီအကြောင်း ပို့စ်တင်တာ ပြောဆိုဆွေးနွေးတာ မတွေ့မိသေးဘူးလားလို့
ဒါပေမယ့် .. ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ …
ဘာဂျာ ဘာမှ သိဝူးးးးနော် ..
နင် တစ်ယောက်တည်း ကျိတ် ဖတ်နေတာပေါ့လေ..
နောက်နေ့ မှ သွားဝယ်ဖတ်ရမယ်
ဟိုနေ့က မရဲတရဲ ဖြဲကြည့်ပြီး ပြန်လာတာ ကပေမဟုတ်လား..
ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ မိထားတာနော်.. မငြင်းနဲ့
အဲဒီမဂ္ဂဇင်း မဖတ်ဖူးတော့ လွန်မလွန် အတိုင်းအတာ မဝေဖန်တတ်ဘူး။ တနေ့ကတော့ အင်တာနက်မှာ (စီအန်အန်လား ရာဟူးလား မမှတ်မိဘူး) လိင်ပညာပေး အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ လုပ်သင့်မသင့် ဆောင်းပါးတခုတွေ့တယ်။ စာကတော့ ထားပါတော့ ဘာချေင်တယ်ဆိုတာ ယေဘူယျသိနေတာပဲ။ တွဲဖက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံက ယောက်ျားအင်္ဂါ ထောင်ထောင်မတ်မတ်ကြီးတွေကို (ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ) ပလပ်စတစ်ပုံသွင်း ပြထားတာ။ အဲလိုမာန်ထချိန် မပြဘဲ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေး ရှိနေချိန်ဆိုလည်း အစိမ်းသက်ကက်ဆို သဘောပေါက်အောင် ပြောဖို့ခက်တယ်။ ပြသနာက စာလိုရှင်း စကားလိုပြောယုံနဲ့မပြီး သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူပြရတော့ စိတ်ပြောင်းကာစ ချာတိတ်တွေအတွက် သင့်တော်ပါ့မလား၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ထင်တာထက် ပိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ အခုဟာက အရင်လို အသက်ပြည့်ပီးသူ တက္ကသိုလ်အဆင့် ဒါမှမဟုတ် အရွယ်ရောက်နေသူ ဆယ်တန်း အထက်တန်းတင် မကတော့ဘူး၊ အလယ်တန်း အချို့ဆို မူလတန်းပြီး ခါနီးလောက်ဆိုရင်ကို သင်ပေးသင့်တယ် ဆိုနေကြပြီ။ ခက်ပါတယ်ဗျာ လောကဂျီးကိုက တားမနိုင် ဆီးမရ…။ ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ် ပျက်ချိန်တန်ပျက် မှတ်ရတော့မှာပဲ အနိစ္စ..။
ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ကောသလမင်းကြီး စင်းစင်းမက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်လည်း ရှိ မဟုတ်လားဗျာ..
လောကကြီးက တားမရဆီးမရဆိုတော့ ထိန်းကွပ်ပြီး လွှတ်ရတော့မပေါ့။
မြန်မာလူ့ဘောင်နဲ့ ကိုက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာလေး အရေးကြီးတယ်
ကျနော့် ငယ်ပေါင်းတွေထဲမှာ ခုနစ်တန်း ရှစ်တန်းနဲ့ အဲ့ကိစ္စအတွက် ခေါင်းအိမ်ရောက်ဖူးတဲ့ သူတွေရှိတယ်
စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ မူလတန်း ပြီးခါနီးမဟုတ်တောင် အလယ်တန်းလောက်ဆို သင်ပြထားသင့်ပြီ ထင်ရဲ့ဗျာ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတော့ ရှိတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်စုံတဲ့ အရာ ဘာရှိလို့လဲ။ မဟုတ်လည်း အင်တာနက် ဘာညာရှိတဲ့နေရာတွေ မပြောနဲ့ ရွာတွေက ဗွီဒီယိုရုံတိုင်းမှာ နောက်ဆုံးကားဆိုပြီး အပြာတွေ ပြနေတော့ကာ မမြင်ချင်အဆုံးပေါ့။ အင်း.. ရင်လေးတယ်
တားတားတို့ ကအရွယ်ရောက်ပီ ဆိုတော့ ဖတ်လို့ရပီပေါ့နော်။
မင်းနံဒါက အစဖော်ပေးတာဆိုတော့ ဖတ်ရအောင် ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ပေးရမယ်။
အမှတ် ၂ ကပုံလေးကို တားတားဖို့ ၀ယ်ပေး ၀ယ်မပေးရင် ငိုမှာ ဗြဲးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကြိုက်တတ်ရင် ၀ယ်ဖတ်.. ဒါဗြဲ..
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေလည်း မှတ်..
တဏှာချည်းပဲ ဖက်မကျန်ခဲ့နဲ့ ပညာ အချက်အလက်တွေလည်း တတ်အောင်ယူ..
(အံမယ် ပြောနေတာ ငါမဟုတ်တဲ့ အတိုင်းပဲ)
ယူကေမှာလဲ အဲဒီ Sex Education ကို အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြတယ်။
အဓိက ဘာသာရေးရှိသူ မိဘတွေ က အဲဒါတွေ ကို သိပ်မကြိုက်ကြဘူး။
ပြသနာက စစ်တန်းတွေ အရ
ကလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာချိန် အပြာကားထဲ ခိုးကြည့်ကြတယ်။
ပြီးတော့ လက်တဲ့ စမ်းကြတယ်။
အဲဒီမှာ ပြထား တာတွေ က တကဲ့ လက်တွေ့မှာ မဖြစ်တာ၊ မဟုတ်နိုင်တာ တွေ ကို သူတို့ က အဟုတ်မှတ်ပြီး ရှုပ်ကုန် တတ်တယ် လို့ တွေ့တာမို့
လက်တွေ့ဘဝ မှာ ရှိတတ်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြဖို့ လိုတယ် လို့ ပြောကြတယ်။
တစ်ချို့ ကလဲ အဲလိုမျိုး ပြောမှ ကလေးတွေ က ပိုပြီး စမ်းချင်တာမို့ လက်မခံချင်ကြဘူး။
တကယ်တော့ ဘယ်လို နည်း နဲ့ ပညာပေးမှာလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း ရဖို့ရယ် အပြင် ပါတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း ကလဲ လိုသေးတယ်။
တစ်ချို့ မိဘတွေ ကိုယ်တိုင် က ကလေးတွေ ရှေ့မှာ အနေအထိုင် မဆင်ခြင်ဘဲ ကလေး ကို ပညာပေးစကား ပြောဖို့ ခက်မယ်။
အခု မဂ္ဂဇင်းက တော့ မျက်နှာဖုံး ကြည့်ရတာနဲ့ လုပ်စား ဖြစ် နေမယ် လို့ မှန်းတာဘဲ။
အမ်ပီဖိုးပလေယာ တစ်ခု နှစ်သောင်းဝန်းကျင်နဲ့ ကလေးတွေ သုံးရနေတဲ့ခေတ်ကြီးဆိုတော့ကာ အပြာဇာတ်လမ်းတွေ သူတို့လေးတွေကြား ဘယ်လောက် ပျံ့နှံ့နေမလဲ သိနိုင်ပါတယ်..
ခိုးကြည့်ပြီး အတုယူမှားတာနဲ့စာရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထိန်းသိမ်း ပညာပေးသင့်တယ် ထင်ရဲ့ အရီးရေ
မြန်မာပြည် လူနေမှုစနစ်အရ .. ပြောရရင် မိဘတွေ ဆင်ခြင်ကြပါသော်လည်း အိမ်နောက်ခန်းနဲ့ အပြင်ခန်း ကြမ်းတပြေးတည်း နေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစုတွေမှာ.. အင်း.. အဲ..
အဲ့ဒီ မဂ္ဂဇင်းက ပလေးဘွိုင်းလို နာမည်ခံပြီး လုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ ပြောင်ပြောင်ပေါ့ ။ ဒါနဲ့ ပြပြီး လုပ်စားချင်တယ်ဆိုပြီး။ လိုင်းခွဲထွက်လိုက်ပေါ့။
ပညာပေးလို့တော့ အမည်မခံနဲ့ ။ ကြား မကောင်းပါဘူး။ သူ့စာအုပ်ဖတ်ရင် လမ်းမှန်မရောက်ပဲ လက်တည့်စမ်းချင်စိတ်တွေပိုလာမဲ့ပုံပေါက်တယ်။ ရေးတဲ့ ကာတွန်းကို ကြည့်အုန်း။ ပုံတွေရောပါ။ ကာလသားတွေအတွက် သီးသန့်လုပ်လိုက်ကြပေါ့။
ကလေးတွေအတွက် လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။( ပြောသာပြောရတယ် ခိုးဖတ်ပြီးနေလောက်ပြီ။ )
အာရှတိုင်းပြည်တချို့က အလယ်တန်းလောက်မှာ သင်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ သိပ်မဆိုးပါဘူး။ ကျောင်းသား ဆရာ မိဘ ခံသာစေမဲ့ အသုံးမျိုးနဲ့ သင်ခန်းစာတခုအနေနဲ့ထည့်ထားတာပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တာမျိုးပေါ့။
အနောက်ကတော့ ပွင့်လင်းလွန်နေလို့ ဘယ်လို သင်ကြတယ်တော့ မသိပါဘူး။ ဒီမှာလည်း ကလေးတွေ မလွယ်တာမှ တကယ်ကို မလွယ်လာကြတာပါ။ ခက်ပါသေးတယ်။
ဒီမဂ္ဂဇင်းခမျာလည်း စိစစ်ရေးကို ပညာပေးရယ်လို့ သွေးတိုးစမ်းကြည့်တဲ့ပုံပါပဲ.. ဘယ်လောက်ထိ ဖွင့်ချပြခွင့်ပေးမလဲမှ မသိနိုင်တာလေ .. ကာလသားတွေအတွက် သီးသန့်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာပါလိမ့်. ဟီး.. (ကာလသမီးတွေက သူတို့ မပါလို့ စိတ်ဆိုးမှာပေါ့လို့) ကလေးတွေ လက်ထဲမှာ ဤစာအုပ်မျိုးမပြောနဲ့ ဟိုမင်းသမီးလေးရဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တောင် ရှိနှင့်ပြီးလောက်ပြီ.. ဒီလောက လူထီးလူမ နှစ်မျိုးပဲရှိပြီး သူတို့အကြားက အမြင့်ဆုံးဆက်နွယ်မှုကို လူ လောကသားကြီးငယ် စိတ်ဝင်စားကြတာကို အတင်းတားလို့ မရပါ.. လမ်းမမှားအောင် အမှန်ပြဖို့ လိုတာပေါ့
..မပုခ်ျလည်း သိသားနဲ့ မလွယ်တာမှ တကယ်ကို မလွယ်လာကြတာကို..
ကျုပ်ကတော့.. မြန်မာပြည်မှာလိုအပ်နေတဲ့.. မဂ္ဂဇင်းစာစောင်လို့ထင်ပါတယ်..
မြန်မာမိန်း(ကလေး)တွေ.. ထိုင်းနိုင်ငံသွားလုပ်စား(ခံ)ကြရတာနဲ့စာရင်.. ကိုယ့်ပြည်တွင်းကိုယ်လုပ်တာ.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတက်လာမှာကိုး..
.. ပြည့်တန်ဆာကိုလည်း.. တရားဝင်လုပ်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..
အထူးသဖြင့်.. ၀င်ငွေနည်းတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့..ဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့.. နယ်စပ်မြို့တွေမှာပေါ့..
ယူအက်စ်ရဲ့..သဲကန္တာရအလယ်က..ဘာမှမရှိတဲ့..လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြို့ကို.. ဒီလိုလိုင်စင်တွေနဲ့..အခွင့်အရေးပေးပြီးလုပ်ခဲ့တာ..အခုတော့.. ကမ္ဘာ့လောင်းကစားနဲ့.. ပြည့်တန်ဆာမြို့တော်ကြီးဖြစ်လို့…
ဆိုင်ရာပြည်နယ်သားတွေကို.. အလုပ်လည်းပေး.. ၀င်ငွေလည်းမြင့်စေတာလေ..
ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာ.. အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့.. နိုင်ငံရေးသမားတွေမြင်ရမယ့်..အချက်ပါ…
ဟိုလိုလို.. ဒီလိုလိုတော့.. ရောမချနဲ့ပေါ့…
ဖတ်လိုက်ရင်.. ဘာလည်း..ဘယ်လည်း.. တန်းသိတာပါ…။
သေချာချင်ရင်.. ဘာအစွဲမှမထားပဲ.. နှလုံးသားနောက်လိုက်.. အဖြေထုတ်ကြည့်.. အဖြေထွက်ပါတယ်..
ဟာ.. ဒါက.. လိင်လှုံ့စော်မှုစာအုပ်ကြီး..
ပထမ.. ၁မိနစ်အတွင်း.. လူဆိုတာ.. သိတယ်..။ :harr:
တော်တော်ကောင်းတဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးမြှင့်နည်းပါတကား…..
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ထိုင်းမှာသွားလုပ်စားတော့ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပိုက်ဆံကုန်တာသူကြီးရဲ့
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ပြည်တွင်းမှာလုပ်စားရင် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေပိုက်ဆံကုန်မှာရော မတွက်သင့်ဘူးလား
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို သင့်လျှော်တဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ တရားဝင်လိုင်စင်ပေး လုပ်ခွင့်ပေးသင့်တာတော့ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသလိုထောက်ခံတာဟာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း တိုးတက်ထွန်းကားစေချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့နေရာနဲ့သူ လုပ်ကြတော့ လူ့စည်းဘီလူးစည်းကွဲပြီး ရက်ကွက်ထဲက မိန်းမကောင်းလေးတွေ ယုန်ထင်ကြောင်ထင် အထင်မခံရစေချင်လို့ ဈေးမေးမခံရစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဟာက ရပ်ကွက်ထဲမှာကို အလှပြင်ဆိုင်နာမည်ခံပြီး၊ ကာရာအိုကေနာမည်ခံပြီး အနှိပ်ခန်းနာမည်ခံပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်ကြ ပြည့်တန်ဆာတွေ သူတို့ဖေါက်သည်တွေ ၀င်ထွက်ကြတော့ ရိုးရိုးလုပ်သားပြည်သူတွေ အနှောက်အယှက်လဲဖြစ်တယ်။ မိန်းမကောင်းလေးတွေလဲ အလွယ်တကူ အဆွယ်ခံရပြီး ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ကုန်တာရှိတယ်။
လိင်လှုံ့ဆော်မှု့စာအုပ်ကို တရားဝင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထုတ်တာကိုတော့ ကွန်ဆာဗေးတစ် အရင့်စားကြီးတယောက်အနေနဲ့ သဘောမကျသေးပါကြောင်း…..
သူ့နေရာနဲ့သူကောင်းမှ ကောင်းပါကြောင်း ……
အခုလည်း ကာလသားတွေ တိတ်တိတ်လေး ပိုက်ဆံကုန်နေတာပါပဲ.. တရားဝင်လုပ်လိုက်ရင် ဘဏ္ဍာလည်းတိုး.. ကိုယ့်သယံဇာတလည်း အပြင်မရောက်.. နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်း ဖိတ်ခေါ်ပြီးသားဖြစ်.. ကြည့်စမ်း အကျိူးများလိုက်လေ :P: ။
လိင်လှုံ့ဆော်မှုစာပေက တိတ်တိတ်ပျံ့နေပြီးသားတောင် ဖြစ်လို့။ တရားဝင်တော့ မလုပ်စေချင်ပါ။ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ ဈေးမေးခံရတာက မေးတဲ့ မျိုးမစစ်ကောင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ နှမချင်းစာနာတတ်သူဆို မနေနိုင်လို့ခေါင်းအိမ် သွားတောင် မသိရင် ဆိုက်ကားသမားမေးမှာပါ။
.. ဒါနဲ့ လေးပါ.. တလွဲနေရာမှာ ဆံပင်ကောင်းနေရင် ဘုတ်သိုက်ကြီးလို ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်
ဦးဦးပါလေရာ ပြောတာလေးကို ထောက်ခံမိကြောင်း
မျက်ကန်းလမ်းသွား ဒုက္ခများ ဖြစ်မည့် အချက်ကို ရင်လေးမိပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မှုခင်းဂျာနယ်တွေ စာမျက်နှာတိုးကုန်ပါ့မယ်။ လိင်လှုံ့စော်မှုစာပေတော့ တရားဝင် မလုပ်ကြပါနဲ့အုံး.. ခုတောင် လမ်းဘေး အခွေဆိုင်မှာ အလွယ်ရနေတဲ့ဟာ တရားဝင်များဆို.. တွေးရဲဘူး.. ပြည့်တန်ဆာကိစ္စ တရားဝင်လုပ်သင့်တာတော့ ကျနော်လည်း အဲလိုအမြင်ရှိပါရဲ့ .. နယ်ထိန်းတွေလက်ထဲ လိုင်းကြေးပေးနေရတဲ့ငွေ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာဖြစ်လာမှာမို့ပါ။ (လုပ်ပေါ့.. ရှင်တို့က ရဲတွေကိုး..ဆိုတဲ့စကား အဲ့မိန်းခလေးတွေ မပြောရတော့ဘူးပေါ့)
ခက်တာက ကျန်းမာရေးပညာပေးမှာ လိင်ကိစ္စဇောင်းပေးလို့တောင် မရသေးသလို ဖြစ်နေတာပဲ.. မြန်မာ မိန်းခလေးတွေ ထိုင်းသွားပြီး Outsourcing ဖြစ်နေအုံးမှာပေါ့ :528:
ဒီပို့စ်မှာ လာမန့်သွားသူတွေ စကားသံဖမ်းရသမျှ အနှီစာအုပ်ကို ဘဓူမှ PDF လေးတောင် မဖတ်ရသေးတဲ့ပုံပဲ.. ကျနော့် အနေနဲ့လည်း ရွာထဲမှာ လင့်ခ်တင်ပေးလောက်တဲ့အထိ လက်မရဲပါ.. (အမှတ်-၁ မျက်နှာဖုံးတောင် အတည့်မတင်ရဲလို့ ဘေးစောင်းလှဲထားတာပါ)..
ရွာသားတွေ တခုခုလိုရင် လင့်ခ်တွေ စိတ်ရှည်ရှည်ရှာပေးတတ်တဲ့ သူတော့ ရှိသားနော်.. အဟီး
ထိုင်းမှာ ကိုယ့်သယံဇာတနဲ့ ကိုယ် Outsourcing ဖြစ်နေတာ မကြည့်ရက်တဲ့ .. မြန်မာပြည်ရဲ့ Loveဗေးဂတ်စ် မြို့ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လာပြီး ငွေတွေ သုံးကြမယ့်ရက်ကို မျှော်ကြည့်ရင်း..
အဘဆီမှာတော့ PDF ပုံစံနှင့်ရှိတယ် ။
6 MB တောင် ရှိတယ် ၊ သူများတွေ ပို့ပေးထားတာပဲ ။
ဒါလေးများ ၊ အဘ အတွက်တော့ ကြည့်လောက်စရာကို မရှိလို့ ၊
အဆုံး အထိတောင် မကြည့် / မ scroll ရသေးပါဘူး ။
လိုချင်တဲ့သူပြော e-mail ကနေပို့ပေးမယ် ။
အဘရေ အဘရဲ့အခုပဲ ပို့ ပေး
တပ်မ ၇၇ ရေ ။
ညှို့ မဂ္ဂဇင်း ပို့လိုက်ပြီနော် ။
ရ မရ ပြန်ပြောပါအုန်း ။
အဘ ဖေါ ။
အဲလို ပွင့်လင်းဒါကို ကြိုက်ထှာ အူးမာဃနဲ့ အူးဖောတို့ရေ
တိတိကျကျပြောရရင် 6.23 MB ရှိတယ်ဗျ.. PDF နဲ့ .. ဟီး
ထိုင်းမှာလို ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ဖွင့်ခွင့်ပေတာ မကြိုက်ဖူးဗျို့…။ (အဲလို ဖွင့်တာကို မကြိုက်တာပြောတာနော် အဲဒီလုပ်ငန်းကို ပြောတာမဟုတ် ) သိုသိုသိပ်သိပ် ရှိတဲ့နည်းလမ်း တခုတော့ရှာရမယ်။ သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ နို့မို့ရင် ဗန်ကောက်လို ဖာမြို့တော်အဖြစ် နာမည်ပျက်မယ်။ မြန်မာပြည်အကြောင်းလည်း သိရဲ့သားနဲ့ ကောင်းတာထက် ဆိုးတာပိုအတုယူလွယ်တာ။ သဂျီးအကြွေးနဲ့ သွားသွားချနေတဲ့ လက်စ်ဗေးဂက် မီးနီရပ်ကွက်ကတော့ အမေရိကန်မှာလေဗျာ။ ပေးသူ ဆော်သူ နှစ်ဖက်စလုံးက အခွန်ပေးတယ်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုရှိတယ်၊ ဒီတော့ အစိုးရကလည် ထိုက်သင့်သလောက် လုံခြုံမှု ကာကွယ်မှု ပြုနိုင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာလုပ်ရင် အဲလိုဖြစ်ပါ့မလား။
ကျောင်းတက်တုန်းက အတန်းထဲမှာ အေးရှားက ကျောင်းသားတွေရှိတော့ ပရောဖက်ဆာက အမေရိကန်နိုင်ငံ လူနေမှုစတိုင်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲမေးတယ်။ ထိုင်းကျောင်းသားတယောက် ဖြေတာက လိင်လွတ်လပ်မှုများလွန်းတယ်လို ဖြေတယ်။ ဆရာ့စိတ်ထဲတော့ မသိဘူး၊ ကျနော့်အတွေးထဲတော့ ထိုင်းလိုနိုင်ငံကလာတဲ့ကောင်ကများ ပြောရတယ်ရှိသေးလို့ ဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အဲလိုတော့ အထင်သေး မခံစေချင်တာ အမှန်ပဲ။ ဖြစ်ခြင်းဖြစ် မြောက်ကိုရီးယားလို လူမိုက်ဘဝကမှ တော်သေး…. (သဘောပြောတာပါ)
(မရိုသေစကား) ယောက်ျားလည်း ယူချင်သေး.. နာမှာလည်းကြောက်သေး ဖြစ်နေဘီဗျ..
မြန်မာတွေ စွန့်ဦးတီထွင်တာ ညဏ်နည်းမယ် .. လေ့လာပြီး လုပ်နိုင်လောက်ဘူးလား..
အခု ကွန်မင့်တွေထဲမှာကို Case Study နှစ်ခုရနေဘီ.. ဗီးဂတ်စ်နဲ့ ဘန်ကောက်.. ဆန်းစစ်ကြပေါ့ တကယ်တမ်း ပြောရရင်ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းနေရသလိုပဲ.. ထိုင်းကလူတွေ လိင်ကိစ္စလုပ်နေတာ သူတို့ လူမျိုးရှားပါတယ် တကယ်လာလုပ်နေတာ တခြားနိုင်ငံက မိန်းခလေးတွေ ဆိုပြီး ဘေးအိမ်ကို လက်ညှိုးထိုးထိုးနေတာ အသည်းနာလွန်းလို့
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုလောက်ကလဲ အဲဒီလို ဂျာနယ်မျိုး ထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပထမစာစောင်မှာပဲ ယောကျာင်္းလေးတွေကြား တသသနဲ့ ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ။ နာမည်မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေပြီဗျာ။ အဲဒီ အချိန်က မြန်မာပြည်မှာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးတွေ ဘာတွေ အစိုးရက အော်နေတဲ့ အချိန်ပဲ။ သူက စာစောင် အာဘော်မှာ ရေးတာတော့ အနောက်တိုင်းမှာ ဒီလို ဖြစ်နေတာတွေ မသင့်တော်တဲ့ ရှက်စရာကိစ္စတွေလို့ နာမည်တပ်ပြီး ပြတာတော့ ပုံတွေနဲ့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပဲဗျာ။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ ဆိုတာတော့ သိသာပါတယ်။ ပြောတာတော့ နယ်ချဲ့ ယာဉ်ကျေးမှု ဆန့်ကျင်ရေးပေါ့။
အဲဒီလိုပဲလေ။ အဲဒါ အထာကျတယ် ခေါ်တယ်။
အူးစံ တတို့ တတို့ လက်ကျန်လေး မရှိတော့ဘူးလား :harr:
ခုမဂ္ဂဇင်းက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရယ်လို့ မပါပါဘူး.. မသကာ ဖက်ရှင်နာမည်နဲ့ ထွက်တဲ့ဟာတွေလည်း ဒီလောက်တော့ ရှိတာပေါ့။ ဆောင်းပါးတွေကတော့ လိင်ပညာပေးများပါတယ်။ လူငယ်တွေ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရလေအောင် ကွက်လပ်ဖြည့်ပေးတာလို့ အယ်ဒီတာကြီးက ပြောရှာပါတယ်။
အေးဗျ ကိုရွာစားကျော်ရေ ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေ ညီလေးတွေ လမ်းလွဲရောက်မှာစိုးလို့ အမုန်းခံပြီး ပထမအပတ်နဲ့ ဒုတိယအပတ်ထုတ် နှစ်စောင်စလုံးကို သူတို့လက်ထဲကနေ အတင်းလုပြီး သိမ်းထားလိုက်တာ။ အခုအသိမ်းလွန်နေတယ်။
(ဟီး အလကားနောက်ထှာ) အယ်ဒီတာတွေကတော့ အဲဒီလိုပဲ ပြောကြတာပဲ။ အဲဒါဆို ကိုယ်လည်း တခုလောက် လုပ်လို့ရပြီ။ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရအောင်ပါ စေတနာ စေတနာ။
အူးစံ အဲ့ဂျာနယ် နာမယ် က “ဝံသာနု”လားမသိဘူး (ဟီး အစဖော် ပေးကြည့်တာ)
အနော် ဆို အဲ့တုံး က ၁၀နှစ် လားပဲ ရှိသေးတယ် လူဂျီးတွေ မသိအောင်ခိုးဖတ်ရတာ
ဆင်ဆာ လေးတွေ မဆိုစလောက်လေးပဲပါတာ၊ တကယ့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပါပဲ ဟီးပြောရင်းနဲ့ တတိတောင်ရလာဘီ
အဲ့တုံးက နဲနဲ နောက်ကျရင် ဝယ်လို့တောင် မရတော့ဘူး ဟီးP
ဟာ ဟုတ်တယ်။ ခင်ဗျားပြောတာ။ ကျနော် အခုမှ သတိပြန်ရပြီ။ ကြိုတော့ ပြောထားမယ်နော်။ ကျနော် လုံးဝ လုံးဝကို မဖတ်ဖူး။ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေ ညီလေးတွေ လမ်းမှားရောက်မှာစိုးလို့ သူတို့ လက်ထဲက အတင်းလုပြီး ကျနော် ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ် ဟဲ ဟဲ။
ကျနော် လုံးဝကို လှန်မကြည့်ဘူး။ စိတ်ကူးမလွဲနဲ့။ တော်ကြာ သူတော်ကောင်းကို စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားတဲ့ အပြစ်ရနေမယ်။
နောင်ကြီးတို့ နှစ်ယောက်က အမှတ်တရ အစဖော်ပေးထားတော့ နယ်ချဲ့ယဉ်ကျေးမှု ဆန့်ကျင်ရေးဆိုပြီး ထွက်လာတဲ့ “ဝံသာနု”စာစောင်နဲ့ အသက်မပြည့်သူများ မဖတ်ရဆိုပြီး ထုတ်တဲ့ “ညှို့မဂ္ဂဇင်း” ကြား တူညီကွဲလွဲတာလေးတွေ သုံးသပ်ကြပါအုံး.. လုပ်စားတွေလား အဟုတ်သမားတွေလား ဆိုတာ..
ညှို့မဂ္ဂဇင်းကို ကျနော် မဖတ်ရသေးဘူးဗျ။ ကျနော့် စိတ်ထင် လုပ်စားတွေပါ။ အဲဒီတုန်းက ဝံသာနုဆို ပထမအကြိမ်မှာတင် တော်တော် ပေါက်သွားခဲ့တယ်။
အဘတို့ ငယ်ငယ် ခေတ်တုန်းက ၊
အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၊ ဂျာကာတာ ထင်တယ် ။
ကုလားမာ တုန်ခါ ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက် သပ်သပ် ရှိတယ် ။
ပြည့်တန်ဆာတွေကြီးပဲ သီးသန့် ထားတာ ။
ရပ်ကွက်က အကြီးကြီး ပဲ ။
တံတိုင်း အကြီးကြီး ပါတ် ခတ်ထားတယ် ။
ကား ဝင်လို့ မရဘူး ၊ နိုက်ကလပ် မရှိဘူး ၊ အေးဆေးတယ် ။
ဝင်ပေါက်လည်း ၂ ပေါက်လောက်ပဲထားတယ် ။
လုံခြုံရေးလည်း လုံလုံလောက်လောက် ချထားတယ် ။
ဆေး သေချာစစ်ထားတယ် ။
အဲဒီလိုမျိုး လုပ်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ် ။
Case Study နောက်တစ်ခုပေါ့ အူးဖောရေ
ကားမဝင်ရ၊ နိုင်ကလပ်မရှိ ဆိုတော့ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ပါ့မလား..
ကျနော်က ကာဆီနိုရုံကြီးတွေပါ စိတ်ကူးထဲထည့်ထားတာ
” ကားမဝင်ရ၊ နိုင်ကလပ်မရှိ ဆိုတော့ ”
ရန် သိပ် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေ ။
ဒါပေမယ့် သုံးထားတဲ့ပုံတွေက တွေ့ရသလောက်တော့ လမ်းလွဲနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်
တစ်ချို့အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းတွေမှာတော့ အလယ်တန်းအဆင့်မှာ လိင်ပညာပေးကိုစသင်ပါတယ်
တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောထွက်ပေမယ့် မြန်မာလိုတော့ပြောမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်
တကယ်ပဲ မရဲတရဲလေးကို ဖြဲမကြည့်ရသေးဘူးလား မိုးဇက်ရေ
အူးမာဃတို့ အူးဖောတို့နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်လေ..
မိုးဇက်ကသာ လမ်းလွဲနေတယ်ယူဆတာ ကြည့်လောက်စရာကို မရှိလို့ ၊
အဆုံး အထိတောင် မကြည့် / မ scroll ရသေးပါဘူးလို့ ပြောတဲ့လူက ပြောနေတယ်နော်။
မြန်မာလိုပြောထွက်ဖို့ တာလွှတ်တော့ခက်မှာပေါ့ အရှိန်ရသွားရင်.. …
စီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ လုပ်ခွင့်ရရင် ထုတ်လာမှာပါပဲ နောက်လည်း ဟောတစ်အုပ်..ဟောတစ်အုပ်
ကြိုက်တတ်သူများ ၀ယ်ကြ၊ငှားကြလေသတည်း.. :harr:
ဟုတ်တယ် နန်းတော်ရာသူရေ.. ချင့်ယုံရပေမပေါ့
စေတနာနဲ့လုပ်တာပါဆိုတာ လူကြားလို့ အကောင်းဆုံး ဆင်ခြေကိုဗျ.. တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျဖို့ လက်နှလုံးအလိုမှာ ကယ်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်း စေတနာနဲ့လို့ ပြောခဲ့တာပဲ (နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်ပြီ) ဆရာဝန်တွေ စာရေးဆရာကြီးတွေ ရေးထားတာ အများကြီးရှိနှင့်ပြီးသော်လည်း ကျနော်ပြောခဲ့သလို တင်ပြပုံကွာပါတယ်ဆိုတာပေါ့.. ဟီး.. ခုမှ အစမိုလို့ပါဗျာ နောက်ဆို ခါခါခွန်းချို သာပါလိမ့်မယ် ရွှေကျီးညိုတွေ.. ဟောတအုပ် ဟောတအုပ် နာမည်မျိုးစုံနဲ့ကို ထုတ်ကြမှာ..
တို့ဆီမှာလည်းရှိဒယ် …..။ ဒီနေ့ ဒေါင်းလောဒ့်ဆွဲလိုက်ဒါ….။ ဒါပေမယ် စာတွေကမှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေတယ် ….။ တစ်မျက်နှာလောက်ဖတ်လိုက်တာကိုခေါင်းတွေမူးလာလို့ ဓါတ်ပုံတွေပဲကြည့်ပြီးသိမ်းထားလိုက်တယ် ဘယ်သူဆီပို့ပေးရမလဲ…။ ပြော ပို့ပေးမှာဗေါ့…။ အချင်းချင်းဒွေပဲဟာ ……….။ ပုံတွေကတော့ မိုက်ဆြာ…….. ရွတ်….။ (သွားရည်ကျသွားလို့)
ကားဈေးတွေ ကျတယ်ဆိုတော့ ငါတို့တော့ ကားဝယ်စီးနိုင်တော့မယ်ပေါ့..
အင်း ကိုယ်လည်း တကယ်ဝယ်စီးနိုင်တဲ့အချိန်ကတော့ လူတိုင်းကားစီးနိုင်တဲ့ အဖြစ်ကိုရောက်ရောလို့..
ဦးနေရေ ခုလည်း ဒီလိုပဲ.. ရွာသူားတွေအားလုံး ဘယ်သူ ခေကြတာမဟုတ်.. ဟိုရှာဒီနှိုက် အစဆွဲလိုက်တဲ့နေရာပါ ဇ ကလေးတွေနဲ့ချည်း။ မင်နဲ့သာ နေ နေကြတာ ကျနော်တို့ဖတ်ပြီးပြီဆိုမှတော့ သူတို့လည်း မွှေပြီးသားနေမှာပါဗျာ..
သူ့ဟာသူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲကနေ
မသေခင် လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့ဟာကို …
ဘာဝေဖန် လေကန်ရမလဲ ….
ကြိုက်ရင် ဖတ် ..မကြိုက်ရင်မဖတ်နဲ့ပေါ့…
ဒါ ဘာဟုတ်သေးတုန်း …
လာအုံးမယ် ..ဆပ်ကာလချာတွေ တပုံတခေါင်း…
အထဲက အကြောင်း အရာတွေ တော့ မသိဘူး။ ဒီလောက်ပုံလေးများ ဘာများဆန်းလို့ လဲကွယ်။ စလုံး က မြန်မာ တွေထုတ်တဲ့၊မြန်မာမတွေ ပဲ အဖုံးတင်ရိုက်ထားတဲ့ သဇင် ဆိုတဲ့ မြန်မာ မဂ္ဂဇင်း အဖုံး တွေ ဆို အဲ အတိုင်းချည်း ပဲ ၊ မြန်မာတွေ ကိုယ့် နိုင်ငံ အပြင်ဘက်မှာ ခေတ်မီ နေတာ ကြာပေါ့ ။
သူ များ အပြောနဲ့ တော့ ကိုယ် လည်း မဝေဖန်တတ်ဘူး ….အဲ… ဖတ်ဖူးတယ်ရှိအောင် ဖတ်ကြည့် ချင်ပါ တယ်။ ရှာနေတာ မတွေ့ လို့၊ အီးမေးလ် pmwmowin@gmail.com ထဲ ပို့ ပေးကြပါဦး။
ရွာသားတွေကတော့ အချင်းချင်း လက် တို့ ပြီး တောင်း ကြတယ် ထင်ပါရဲ့ ကွန်မန့် ထဲက တောင်း တဲ့သူ မတွေ့ ဘူး ၊ မိုချို ကတော့ ပေါ်တင် ပဲ တောင်း ပါတယ်။ဒေါင်း လို့ ရ မယ့် link ဖြစ်ဖြစ် PDF ဖြစ်ဖြစ်
နှာဂိုထောင်ကြီး ဖွတ်တီးကွတ်ကတော့ မေးလ်နဲ့ လျောက်ဖြန့်နေတာပဲခည…
ကျော်ကတော့ ဖွင့်မကျိပါဝူး … နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်ပဲဟာ …ဂလောက်တော့ မဖြုံ…ဟီဟိ။။။
ရောစ့် အစ်မရေ …
ပွန်းဘက်ကိုလည်းမသွား ကျန်းမာရေးဘက်ကိုလည်း မထိရောက်တဲ့…
လုပ်စား မဂ္ဂဇင်းပါဗျာ …
လင့်ခ်တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါ.. မသေခင် လုပ်ချင်တာ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကဲချင်သလိုကဲပြီးကာမှ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရလေအောင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေ ရှိသပေါ့။ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဖြစ်တာကလည်း မြေစမ်းခရမ်းပျိုးရတာကိုး။ ပွန်း(sex) နဲ့ ကျန်းမာရေး(Health) အပြင် လူနှစ်ယောက်ကြားက ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု(Relationship)ကို ဘယ်လို စခန်းသွားသင့်သလဲဆိုတာတွေ အမှိုက်ထဲက ရွှေလို ကဲ့ယူကြည့်ပေါ့ကွာ.. အချဉ်ပြေပေါ့
အင်တာနက်နဲ့ နိုင်ငံခြားမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ကြီးက ဈေးချိုနာရီစင်နားမှာရော ခေတ်ရှေ့ပြေးစတိုင်တွေ မတွေ့နိုင်ဘူးလား အားလုံးအသိပါ.. လူသိရှင်ကြား မီဒီယာစာပေအဖြစ်ထုတ်မှ မဟုတ်သလို လုပ်ချင်ကြတာ ..
ယူချင်တော့လည်း ပညာ.. မယူချင်တော့လည်း တဏှာပေါ့လေ..
တကယ်တမ်းတော့ လိင်စာအုပ်ဆိုတာကလည်း နှစ်မျိုးရှိသကွယ်….
ပထမ.. ၁မိနစ်အတွင်း.. လူဆိုတာ.. သိတယ်..။
တခုက လှုံဆော်တာ တခုက ပညာပေးတာ…..
ဥပမာ တရုတ်ကား နာမည်ကြီး Sex and Zen I…. ပီးတော့ နောက်ဆုံးပေါ် 3D Sex and Zen
အားလုံးဟာ ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာပဲ…..
ကြားဖူးနားဝ စကားချပ်လေးတခုလို ပြောရရင်တော့
တဒင်္ဂအတွေးနဲ့မိစ္ဆာဖြစ်နိုင်သလို တဒင်္ဂအတွေးနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်….
ဖြစ်ပီးသွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ စဉ်းစားတက်ဖို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အသိကိုသွင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်……
တခါတလေ ကျတော့လည်း လူဆိုတာက ခက်သား….
စာတွေလည်း ဖတ်ဖူးတယ်…. Sex Education လည်း မသင်ဖူးတာမဟုတ်….
ဆေးတွေဘာတွေလည်း အလွယ်တကူ အကာအကွယ်တွေလည်း အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့ နေရာ က စုံတွဲတတွဲ…. နိုင်ငံခြားတခုမှာပေါ့နော်….
ကျွန်တော်တဲ့ အမလိုခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီ ရောက်လာတယ်…. လက်ထပ်ပေးဖို့ တဲ့ အသိသက်သေ လုပ်ပေးပါတဲ့…….
အစကမသိဖူး လုပ်ပေးမယ်ပေါ့… လက်လည်းထပ်ပီး သိပ်မကြာပါဖူး… အမဆီ ထပ်ရောက်လာပါတယ်….
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ကူညီပါအုံးတဲ့…..
စဉ်းစားတက်တော့ဖူးကွယ်… အခုထိ လိုက်မမိဖူး ဘာအကွက်လည်းဆိုတာတော့….
အမဆိုပြောပါတယ် ကာလို့ မရတာလည်းမဟုတ်တဲ့…..
နောက်ပီး သူငယ်ချင်း အမတယောက် ကျူရှင်သင်ပါတယ်…..
မန်းမှာပါ…. သူက ဆေးကျောင်းမှီရဲ့သားနဲ့ဆေးကျောင်းမတက်ချင်လို့အဝေးသင်တက်ပီး…..
အမှတ်က ကောင်းလေတော့ တခြား မိဘတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်နဲ့ကျူရှင်တော့ ပြပါတယ်….
ကျူရှင်က ကလေးတွေက ၂ နှစ် ၃ နှစ် ကွာကြတယ်….
ကလေးဆိုပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ က အသက်မတိမ်းမယိမ်းရယ်လေ…
တနေ့သူ့ ကျူရှင်က ကောင်မလေး တယောက်က လာပြောတယ်…
အမရယ် သူ့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးနဲ့ ဟိုကားထဲကလို စမ်းကြည့်တယ်တဲ့…..
အမက စိတ်ပူပီး မေးကြည့်တယ်…. အကာပါလားပေါ့….
မပါဖူးတဲ့… ဘုရားဘုရား…. ကိုယ်ဝန်တော့ မရသွားရှာပါဖူး…..
နောက်မလုပ်ဖို့နားချလိုက်ပါတယ်…..
ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေလည်း တခြားရှိပါသေးတယ်….
ဘာပဲပြောပြော ဒီမဂ္ဂဇင်းဟာ ရှိသင့်တဲ့ စာအုပ်တအုပ်ပါ….
နာမည်နဲ့တူအောင် ဆွဲဆောင်မှူလည်းရှိသလို ပညာပေးလေးတွေလည်း ပိုပါရင် သင့်တော်မှာပါလို့ …..
ပြောရင်လည်း မကုန်တာမို့ ….
ပုံတွေကြည့် ပြီး စာတွေ အကြမ်း ဖျဉ်း ဖတ်ကြည့် လိုက် ပါတယ်။ ဒီပုံတွေ ကအင်တာနက် သုံးနေကြ သူတွေ အတွက် တော့ သိပ် မဆန်း ပေမယ့် အင်တာနက် နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ သူတွေ အတွက် တော့ အမြင် ရိုင်းတယ် ထင် ပါလိမ့် မယ်။ စာတွေ မှုန် နေလို့ သေချာ မဖတ် ရ သေးပေမယ့် ဖတ်ပြီးတဲ့ တချို့ စာတွေ က မဆိုး ပါဘူး။ အိမ်ထောင် သည် မမ တချို့ သတိပြု ရ မယ့် အချက်တွေ ပါတယ်။ ယောက်ျား ရပြီး ရင် ပြီးပြီ ဆိုပြီး နေတတ်တဲ့ အမျိုး သမီး တွေ ကိုယ့် ယောက်ျား အငယ် အနှောင်း ထား မှ မျက် ရည် လည်ရွှဲ နဲ့ ဗေဒင် ဆရာ ဆီ သွား မဲ့ အစား၊ ကိုယ် ဘက်က ညံ့ လို့ ပြည့်တန်ဆာ ဆီ ရောက် သွား ပြီး မမြင် နိုင်တဲ့ ရောဂါအကူး ခံ ရမယ့် အစား ကိုယ့် ကိုယ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ် သင့် တဲ့ ဟာ မျိုးလေးတွေ ကတော့ ယူတတ် ရင် ပညာပေး တာပဲပေါ့။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပို့ပေးထားလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ထဲက အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်း ebook အနေနဲ့ ရထားခဲ့ပါတယ် ။
နှစ်ကုန်ခါနီးအချိန် အလုပ်တွေ နှစ်ဆလုပ်နေရတာကြောင့် … ဒေါင်းလော့သာဆွဲပြီးဖွင့်ထောင်မကြည့်ရသေးတဲ့ အနေထားမို့ ၊ ဖတ်ပြီးမှပဲ ပြန်ဆွေးနွေးပါဦးမယ် ကိုရွာစားကျော်ရေ ။
လိုချင်သူတွေရှိလျှင်လည်း ၊ etone.mandalaygazette@gmail.com ကို စာပို့ပြီး လှမ်းတောင်းပါက ၊ အလုပ်ချိန်ပြင်ပအချိန်တွေမှာ ရှဲပေးပါမယ် ။
ဒေါင်းပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဓါတ်ပုံတွေကများပြီး၊ ကျမ်းမာရေးပညာပေးလဲမတွေ့မိဘူး။ လုပ်စားတာနေမှာပါ။